Indonesia Bali(4D-3N) - Asia Time Travels & Tours
Yangon – Bali – Yangon
Yangon – Bali
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ( ) Airline ဖြင့်ဘာလီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိပြီးနောက်ဒေသခံ Tour Guide မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီးညစာကို Local Restaurant တွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ check-in ဝင်ကာအနားယူ အိပ်စက်ပါမည်။
ဟိုတယ်တွင် မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ဘာလီကျွန်း၏ အရှေ့ဘက်ရှိBatubulan Village သို့ သွားရောက်ကာနာမည်ကျော် ယဉ်ကျေးမှု သရုပ်ဖော်ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သော Barong and Keris Dance ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုပါမည်။ ထို့နောက် ဘာလီလူမျိူးတို့၏ အဓိကအနုပညာလက်ရာများစွာရှိသောCeluk, Mas and Ubud Village များသို့သွားရောက် လေ့လာပါမည်။ နေ့လည်စာကို Local Restaurant တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် Denpasar မြို့တော်တွင်ရှိပြီးဘာလီလူမျိုးတို့၏ အထိမ်းအမှတ် ကျောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သောBajraSandhi Monument သို့ သွားရောက် လည်ပတ်ပါမည်။ ထို့နောက် နာမည်ကျော်ကြားသော Temple တစ်ခုဖြစ်သော Tanah Lot သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက် ညစာကို Local Restaurant တွင် သုံးဆောင်ပြီးဟိုတယ်တွင် အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။
ဟိုတယ်တွင် မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် TanjungBenoaကမ်းခြေသို့ သွားရောက်ကာ banana boat ၊ jest ski ၊ snorkeling အစရှိသောရေကစားခြင်းများကိုပျော်ရွှင်စွာဆော့ကစားပါမည်။ နေ့လည်စာကို Local Restaurant တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် ပင်လယ်ရေမျက်နာပြင် အထက် ပေ၂၅၀ အမြင့်ရှိပြီးဘာလီကျွန်းပေါ်ရှိကျော်ကြားသောနေရာများထဲတွင် တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်သော Uluwatuသို့ သွားရောက်ကာလည်ပတ်ပါမည်။ ထို့နောက် ထုံးကျောက် တောင်ကုန်းပေါ်တွင် တည်ရှိပြီးဘာလီလူမျိုးတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု များကိုပေါင်းစည်းထားသောအမှတ်အသားအဖြစ် သတ်မှတ်သောနေရာဖြစ်သည့် Garuda WisnuKencana Statue တည်ရှိရာသို့ သွားရောက် လည်ပတ်လေ့လာပါမည်။ ညစာကို BBQ Seafood ဖြင့် Local Restaurant တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ်တွင် အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။
Bali – Yangon
ဟိုတယ်တွင် မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ကိုယ်ပိုင်အားလပ်ချိန်ယူပြီးဘာလီအပြည်အပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ( ) လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပါမည်။
AT#25 Leisure on Cruise at Mergui Archipelago(6D-5N)
AT#25 Leisure on Cruise at Mergui Archipelago
Yangon – Hannoi – Ha Long Bay
Culture & Nature (9D & 8N )
AT#07 Culture & NATURE (9 days 8
No. 101, Building-(3C), Thuwanna Housing, Than Thu Mar Road, Thingangyun, Yangon.
+959-4502-94010, +959-4502-94060, +951-856-5519
© Asia Time Travels & Tours 2016. All Rights Reserved. Another Creation of Media Lane, The Creative Agency.